Immisa isbuuc ayuu maqnaan doonaa sergio Ramos.
Home Horyaalka Spain Immisa isbuuc ayuu maqnaan doonaa sergio Ramos.
Real Madrid ayaa ku dhibtooday inay la sii xifaaltanto kooxaha Atletico Madrid iyo barcelona xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga waxaana haatan dhabar jab weyn ku ah warka ah in kabtankooda iyo talismankooda Sergio Ramos uu ka maqnaan karaan ilaa 7 isbuuc.
Los Blancos ayaa laga dhaliyay ku dhawaad labo jibaar tirada goolasha kooxda Diego Simeone ay ku leeyihiin horyaalka xilli ciyaareedkan, iyadoo ragga Zinedine Zidane ay haatan toban dhibcood ka dambeeyaan hogaamiyaasha.
Maqnaanshaha Ramos oo horey u seegay lix kulan oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan dhaawac dartii ayaa shaki la’aan saameyn ku yeeshay horyaalkooda, iyo Zidane wuxuu hadda u muuqdaa inuu yahay nin aan lahayn talisman muddo dheer ka dib markii uu soo baxay warka lagu qasbay inuu qalliin ku sameeyo dhaawac jilibka ah.
COPE ayaa soo warinaysa in Ramos uu seegi doono lix ilaa todobo isbuuc garoomada madaama uu dib u soo laaban doono qaliinkan taasoo ah inuu u arko inuu seegayo ilaa iyo toban kulan oo ay ku jiraan labada lugood ee wareega is reebreebka Champions League ee ay la ciyaarayaan Atalanta.
Marka laga hadlayo tallaabada La Liga, Ramos wuxuu seegi doonaa kulanka guriga ee Real Sociedad iyo sidoo kale safarkooda weyn ee Atletico horaanta Maarso Kabtanka Madrid wuxuu isku dayay inuu ka ciyaaro caqabad xanuun – isagoo ka qeyb galaya seddex tababar oo uu la qaatay kooxda koowaad – laakiin markii uu awoodi waayey inuu ka qeyb galo tabarbarkii Jimcaha.
Previous articleManchester United iyo Chelsea oo ku dagaalamaya saxiixa Jadon Sancho xagaagan
Next articleKooxo badan oo isku heystaan Devid Alaba.